KhunMoung ' s: Blogging Addiction
Blogapathy _acondition caused by excessive blogging leaves little time for keeping up with current events and pop culture.
“ It’s like—I don’t even care anymore what goes on in the world—unless it affects my blog ” (swiped from Bloggers Anonymous)
hninhnin October 27, 2007 at 5:32 PM
ပျော်ရွှင်စရာ သီတင်းကျွတ်ပါ အခွံ... ပို့စ်တွေက ပညာရစရာတွေများလို့ ကြိုက်တယ်။ ဖတ်ပြီးရင် ဘာရေးရမှန်းမသိလို့ ဘာမှရေးရေးမသွားဖြစ်ဘူး။ ဒီဘလော့မှာ ကိုယ့်ဘာကိုယ် ဘန်နာတင်တာ အဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်။ ကိုယ့်ဒီဇိုင်းနဲ့ ကိုယ်ပေါ့။ အဲဒါကို ဘန်နာလုပ်ချင်တာ။ အဆင်ပြေရင် တစ်ချက်လောက်ပြောပြပါလား။ ဒီကွန်မန့်မှာပဲ လာပြန်ဖတ်မယ်နော်။ အားတဲံအခါလေး...
Karaweik ကရ၀ိတ် 妙声鸟 Alvin (Sumedha) October 28, 2007 at 9:16 PM
Autism -abrain development disorder characterized by impairments in social interaction and communication, and restricted and repetitive behavior...
'Blogo-autism syndrome' - the latest discovery in autistic spectrum disorders usually observed in the internet-savvy generation.
စိုးထက် - Soe Htet ! October 29, 2007 at 4:57 AM
Blogo-autism or blogapathy, whatsoever it is which I'm sufferring now ! :P
KhunMoung October 29, 2007 at 5:11 AM
Thanks Alvin ...
Your commment reminds me of the film "Rain Man" that starred Hoffman and Tom Cruise) in which Hoffman playsarole of person who is suffering from Autism.All I have read about these people is that they are very pitiful,but some of the abilities and intelligence are incredible.But I have never seen and experienced such these persons in my real life.LOL!
Thanks for sharing some facts and dropping by.
KhunMoung October 29, 2007 at 5:16 AM
ako Soe Htet,
me too .I'm now suffering from Blog Dependency Syndrome , which is incurable medically. Just fun.....
KhunMoung October 30, 2007 at 4:41 AM
နှင်းနှင်း(သို့)သိုးမလေးသို့ ... နှင်းနှင်းက ဘန်နာတင်ရင်....အခုထားထားတဲ့ ဘက်ဂရောင်းကို ထားထားဦးမှာလား။ အခု ဘက်ဂရောင်းကလည်း လှပါတယ်ဗျ။ ဘန်နာကတော့ တော်တော်ကြီးနေတယ် ပြောရမလားပဲ။ နှင်းနှင်းဘလော့ဂ်ကို စရောက်ခါစက..ပို့စ်တွေပျောက်နေတယ်။ ရုတ်တရက်မတွေ့ဘူး...ဟိုးအောက်ရောက်နေတာ။ ဟီး။
ဒါလေးတွေ ဖတ်ကြည့်ပါလားဗျ။ အထောက်အကူဖြစ်မလားလို့ပါ။
hninhnin October 31, 2007 at 6:53 AM
အခွံရေ ပြောပြပေးတာကျေးဇူး။ အောက်ခံကိုတော့ မပြောင်းချင်ပါဘူး။ အရောင်လည်း ကြိုက်တယ်။ ဘန်နာကိုပဲလေ အေးချမ်းသူလုပ်ထားတဲ့ ဘန်နာပြောင်းချင်တာ။ နားမလည်တော့ template ထဲက ဘယ်ဟာကို ဖျက်ပြီး ဘယ်လိုထည့်ရမှန်းကိုမသိတာ။ တနင်္ဂနွေကျရင်တော့ အားပြီလေ။ အဲဒီနေ့ကျရင်တော့ အကုန်ကြိုးစားကြည့်လိုက်ဦးမယ်။